တာဝန်ဝတ္တရား မကျေသလို ခံစားနေရတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရန်အောင် - Yin Khat Pan
တာဝန်ဝတ္တရား မကျေသလို ခံစားနေရတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရန်အောင်
October 4, 2020 Yin Khat Pan Entertainment 0
နှစ်​​ပေါင်း ၃၀​ကျော်​ အနုပညာ​လောကမှာ အခိုင်​အမာ ရပ်​တည်​​နေဆဲဖြစ်​တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်​​ဆောင်​ မင်းသား ရန်​​အောင်​က​တော့ ယခုအချိန်​ထိ ပရိသတ်​အား​ပေးမှုရရှိဆဲ မင်းသားတစ်​လက်​ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ကိုရန်​​အောင်​က​တော့ တစ်​​ခေတ်​တစ်​ခါက အတွဲညီညီသရုပ်​​ဆောင်​ဖူးသူ အခုအချိန်​ထိ ဇာတ်​လမ်း​တွေမှာ တွဲလျက်​​တွေ့​နေရတုန်းဖြစ်​တဲ့ လုပ်​​ဖော်​ကိုင်​ဖက်​ အကယ်​ဒမီ မို့မို့မြင်​​အောင်​ မိခင်​ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက်​ စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​​နေတာပါ။
ယခုကာလမှာ ကိုဗစ်​​ရောဂါကူးစက်​မှုစိုးတဲ့အတွက်​ လူစုလူ​ဝေးကိုတတ်​​နိုင်​သမျှ​ရှောင်​​နေရတာ​ကြောင့် မမို့အ​မေရဲ့ဈာပနကို လိုက်​ပို့ခွင့်မရတဲ့အတွက်​ ရန်​​အောင်​က ​” ချစ်ရတဲ့အစ်မ မမို့(မို့မို့မြင့်အောင်)ရဲ့မွေးမိခင်ကြီး ယနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅)မိနစ်မှာ လူကြီးရောဂါနှင့်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်.
ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်က ချစ်တဲ့ မာမီ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့ရ,မျက်နှာလေးကိုမကြည့်လိုက်ရလို့ ပိုပြီး ခံစားကြေကွဲရပါတယ်မာမီရေ… ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့နီးပါတယ် လမ်းထိပ်တင်၊ ဒါပေမယ့် Covid ကြောင့် ဘယ်မှမသွား/မလာရတော့ ဝတ္တရားမကျေသလိုခံစားရပြန်တယ်.. အသက်(၉၉) နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာမီရေ…. ဒီ(၉၉) နှစ်လုံး သုံးလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အဟောင်းကိုစွန့်ပြီး ကောင်းရာဘုံဘဝသစ်မှာ ခန္ဓာသစ်နဲ့ သုခချမ်းသာပြည့်စုံရရှိပါစေခင်ဗျာ” လို့ ​ရေးသားကာ ဆု​တောင်း​ပေးထားတာပါ။
အကယ်​ဒမီများရှင်​ မို့မို့မြင့်​အောင်​ရဲ့မိခင်​ကြီးက​တော့ စက်တင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅) မိနစ်မှာဆုံးပါးသွားတာဖြစ်​ပါတယ်​။
မို့မို့မြင့်​အောင်​ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း မိခင်​ဈာပနကို မလိုက်​နိုင်​တာကို နားလည်​​ကြောင်းကို
“မို့ ကြေကွဲစွာခံစားနေရပါတယ် မို့ မိခင်ကြီး ၊အသက်(၉၉)နှစ် ၃၀-၉-၂၀၂၀ နေ့လည် ၁:၀၅ မိနစ်မှာ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ မို့ ခံစားနေရသလို သဲသဲတုန်လေးတွေလည်း ခံစားနေရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် ဖွားမာမီရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့ကြပါနဲ့ မို့ အများကြီးနားလည်မှုရှိပါတယ် Covid နှင့် Lockdown ကြောင့်မို့ပါ။ မို့ စာအများကြီးမရေးနိူင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။” လို့ သူ့ရဲ့ ​ဖေ့ဘွက်​စာမျက်​နှာမှာ​ရေးသား​ထားတာကို ​တွေ့ရပါတယ်​။
Yin Khat Pan ( Writer – LLA )
သမီးလေးရဲ့ ၁၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို သူအရမ်းကြိုက်တဲ့ Idol နဲ့ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်း
မင်းသွေး မကွယ်လွန်ခင်က နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေကို အမှတ်တရ ပြောပြလာတဲ့ သားညီ